Kwabesifazane abakhulelwe kanye izinsana kubalulekile ikakhulukazi ukunakekelwa isikhumba ebucayi. Izimali kumele kube njengoba ephephile ngangokunokwenzeka, ukuze bathathe isinyathelo ngokushesha, ephumelelayo ukuthambisa futhi moisturize isikhumba. Cream-emulsion "aqunge Stelatopiya" eyenzelwe ukuhlangabezana nezidingo zabo bonke izinsana, ingasetshenziswa kusukela ezinsukwini zokuqala zokuphila umntwana, kanye omama abakhulelwe at zonke izigaba inkathi yokukhulelwa.
Izimonyo umugqa "aqunge Stelatopiya" kuthiwa ephulukisa. Baye lakhiwe laboratories Expanscience (France) ngoba isikhumba ukunakekelwa wabeletha kwabesifazane abakhulelwe, izinsana.
Uchungechunge lwemfundo amathuluzi zihlanganisa ukhilimu wokugezela ngokuba amabhati ibhotela ukhilimu emulsion "aqunge Stelatopiya".
Cream emulsion kusetshenziswa khona ukoma anda isikhumba ebusweni nasemzimbeni. Uyakwazi ukususa ngokushesha ukuqaleka evimbela ingane beneme. "Mustel Stelatopiya" (ukhilimu emulsion) uyakwazi ukunakekela obucayi ingane isikhumba, ukuba bagcine microflora ukubuyisela isakhiwo elomile epidermis lilimele.
Leli thuluzi ngokushesha lingena singene isikhumba ejulile, likhuthaza biosynthesis ngaphezulu asebenzayo of lipids, elikhishiwe kwezinye izinguqulo izidakamizwa intercellular kanye zokuzivikela isikhumba isithiyo.
ukhilimu emulsion nayo isebenza ku izingqimba yesikhumba yangaphandle: sibonga izithako zako asebenzayo kuya epidermis moisturized, iba ezithambile. "Aqunge Stelatopiya" ibuyisela isikhumba futhi zivikela ukoma, igcina ibhalansi amanzi evamile.
Uchungechunge izingane "aqunge Stelatopiya" yakhelwe ukwelashwa eyinkimbinkimbi dermatitis koma okwandisiwe isikhumba. Odokotela bezingane ukweluleka imiphumela kangcono kanye nangesivinini zisebenzisa lonke uhla kwezimali:
I-ukugeza ukhilimu isetshenziselwa ukunakekela nsuku zonke izinsana nabantu abadala, abesifazane abakhulelwe kanye nabesifazane okuyibona abelethe, abantu abanesikhumba ebucayi futhi yomile.
uwoyela Bath ithambisa kahle isikhumba, kuvimbela overdrying.
Cream-emulsion "aqunge Stelatopiya" isetshenziswa moisturize ukuvikela isikhumba obucayi emva ukuwasha kanye ukugeza.
Ndawonye lezi zimali babheke ngokucophelela emva epidermis, uthambekela ukoma futhi komzimba, dermatitis kanye eczema yizikhukhula. Kodwa hhayi lonke uchungechunge ingasetshenziswa futhi njengoba imikhiqizo azimele wodwa. Ethandwa kakhulu yilona emulsion.
"Aqunge Stelatopiya": Ukwakheka
Lolu chungechunge lakhiwe ngqo ebucayi ingane isikhumba. Kuthathwa ekhethekile futhi kufanelekile hhayi kuphela izingane nge komzimba nezinto izimonyo dermatitis, kodwa futhi izingane ephelele.
Isakhi esiyinhloko kusho ukunakekelwa kwesikhumba - a amafutha sunflower ezivamile, okuyinto kulo mjikelezo ngendlela ekhethekile futhi ine yaba nelungelo lobunikazi laboratory-umdali.
"Mustel Stelatopiya" (ukhilimu emulsion) okunye kuhlanganisa izinto ezifana:
sicashunwa imbewu plums;
Leli thuluzi ngokuphelele kugcina umswakama esele futhi ivikela isikhumba omiswe, esaziwa umswakama ngaphakathi.
okugeza ukhilimu ahlanganiswe izingxenye ezengeziwe:
Leli thuluzi ekahle wokuwasha, lokho kuvimbela ukuvela sinemizwa yobunzima, ukungakhululeki, kahle asihlanze isikhumba amanyela.
uwoyela Bath iqukethe:
amafutha sunflower imali beyizidlakela kunamanye lweluchungechunge;
Kufanele kuqashelwe ukuthi i-ayisikhilimu-emulsion "Mustel Stelatopiya" kanye nezinye izindlela kulolu chungechunge zingenalo ngamakha, udayi namanye amakhemikhali ayingozi. Yingakho omama abaningi baye waphathisa isikhumba obucayi izingane zakho ozithandayo lokhu izimonyo.
"Aqunge Stelatopiya" ukhilimu emulsion: yokusetshenziswa
Ngaphambi kokufaka isicelo izimali isikhumba womntwana kufanele kahle bahlanza ukungcoliswa ngamanzi. Kungcono ukusebenzisa cleanser ukhilimu noma uwoyela okugeza yochungechunge efanayo. Zizonke, lezi zimali uyonika imphumela ongcono.
Ngemva kokugeza, isikhumba kumele kube kahle ezomile. Inani elincane emulsion lisetshenziswa ebusweni isikhumba wagcoba ngokunyakaza isiyingi for ukumuncwa ngokushesha.
Kunconywe ezindaweni driest kubangele semali ukhilimu, basihlikihle kuze kube isikhathi lapho ithuluzi is hhayi egxile ngokuphelele.
Kunoma yikuphi, i ukhilimu emulsion akufanele zisetshenziswe lezo zindawo isikhumba lapho uyakhala eczema. Lokhu kuyomane babhebhethekisa inkinga. Kule ndawo, ukusebenzisa ingane powder nasezinganeni okuyingxenye kencani ayikwazanga ukuthola khona.
Vumela cwilisa kahle, bese agqoke ingane. Okwamanje makathabathe i okugeza emoyeni (Yiqiniso, uma izinga lokushisa Igumbi kuyinto ukhululekile), ukwenza ingane yakho massage, udlale nalo.
Ayikho contraindications ukusetshenziswa nobudala imikhawulo. Uma une hypersensitivity kunoma ingxenye izimali, akukuhle ukuyisebenzisa.
Kwakungekho Udaba olulodwa lapho abazali baye baqaphela imiphumela engemihle ukhilimu, namafutha amabhathi kanye emulsion ukhilimu. ukubukeka olungenzeka komzimba nezinto indlela izithako. Uma uqaphela ukuthi isimo isikhumba saba sibi kakhulu ngemva waqala ukusetshenziswa eyodwa noma ngaphezulu imali, "aqunge Stelatopiya", ukusetshenziswa kufanele ayisekho.
Ziyini izindleko futhi kuphi ukuthenga?
"Aqunge Stelatopiya" (ukhilimu-emulsion, 200ml) kubiza ruble angaba inkulungwane nengxenye. Omunye tube ihlala isikhathi eside. Njengoba ukungaguquguquki yayo oily, akudingi semali imali ukusetshenziswa olulodwa.
Thenga ukhilimu kungaba ekhemisi, izimonyo okukhethekile esitolo noma esitolo online. Iyatholakala ngaphandle kadokotela.
"Aqunge Stelatopiya" ukhilimu emulsion: Izibuyekezo
Abesifazane abaningi abazi ukuthi kakade ejabulela kulolu chungechunge izimonyo. imibono Bad eziye zatholakala, babhala ukuthi lokhu ngempela ukhilimu ezinhle.
Kukhona Izibuyekezo ukuthi emulsion ukhilimu kuyinto enhle hhayi kuphela ukhathalela isikhumba izingane, kodwa futhi abadala siyijabulele. Babhala ukuthi isikhumba ayephelele, ukulunywa uvimbekile ukoma, ukungakhululeki.
Abathengi ukujabulela "aqunge Stelatopiya" - ukhilimu-emulsion, yokusetshenziswa, kusho incazelo nokubonakaliswa ukusetshenziswa okuyinto zichazwe ngokuningiliziwe kulesi sihloko. Ukukhulunyelwa komBhalo ukuboniswa nabesifazane ukusebenzisa leli thuluzi ngoba izingane, futhi moisturize isikhumba sami. Qaphela ukhilimu lapho kungekho imibala yokufakelwa kanye flavour.
Abesifazane abanomzimba ongezwani nezinto ezithile kuya izimonyo atholakala yensindiso. Sabhala ukuthi akukho nezinye ukhilimu asifanele, njengoba kukhona amabala ukuqubuka kanye yilona thuluzi ekahle.
Akubuzwa ukuthi imikhiqizo yenziwe ngezithako zemvelo, like iningi labantu? "Aqunge Stelatopiya" ukuthatha ngokucophelela ukunakekela isikhumba sakho futhi isikhumba izingane.
Parabens izimonyo - kuyingozi noma cha
Deodorants Axe: Izibuyekezo kanye Imininingwane
Lebedeva Olga actress: Biography futhi Filmography